CC Shakuur: Inqilaab dadban ayuu Farmaajo dalka ku qabsadey | KEYDMEDIA ONLINE
CC Shakuur: Inqilaab dadban ayuu Farmaajo dalka ku qabsadey
Musharaxiinta ayaa kulan ay ku yeesheen shalay Muqdisho ku sheegay inaysan aqoonsanayn Farmaajo inuu yahay Madaxweyne sharci ah, maadaama mudo xileedkiisa uu dhamaaday.
MUQDISHO, Soomaaliya - Musharax C/raxmaan C/shakuur Warsame ayaa sheegay in Farmaajo uu afgembi dadban ku qabsaday dalka, maadaama iyadoo dhamaadey waqtigiisa uu kursiga kusii fadhiyo, islamarkaana diiday inuu xukunka si nabad ah ku wareejiyo.
Isagoo ka hadlay Shir Jaraa'id, CC Shakuur ayaa ku eedeeyay Farmaajo inuu sameynayo xukun boob iyo fowdo siyaasadeed, taasoo uu sheegay wixii dhibaato ah oo ka dhasho uu isaga qaadi doono mas'uuliyadeeda.
"Farmaajo maalinna ma ixtiraamin sharciga iyo dastuurka dalka, waxayna taariikhdiisa afarta sano kuli ahayd gacan ka hadal iyo inuu awood Ciidan adeegsado," ayuu yiri Musharaxa.
Wuxuu CC Shakuur u sheegay Shacabka in waxa uu ku fadhiya Farmaajo Madaxtooyadda uu yahay afgembi aan dhiig ku daadan, maadaama uusan haysan wax sharciyad ah oo kursiga kusii fadhiyo.
Siyaasiga ayaa xusay in Midowga Musharixiinta ay qaadi doonaan tallaabooyin hadii uusan Farmaajo xilka iska dhiibin, islamarkaana isku dhejiyo xukunka isagoo waqtigiisu dhamaadey.
Beesha Caalamka ayuu CC Shakuur ugu baaqey inaysan waqtiga ku lumin taageeridda Madaxweynaha waqtiga ka dhamaadey, oo aan haysan sharciyad uu ku joogo Madaxtooyadda, isagoo hoosta ka xariiqay inaysan Musharixiinta aqbali doonin in lagu dul-hayo nin mudo korarsi doonaya.
Farmaajo ayaa dhameystay mudo-xileedkiisa isagoo aan dalka u diyaarin doorasho, waxaana arintaasi lagu micneeyay inuu rabo xukunka inuu sii haysto, oo Soomaaliya kusoo celiyo nidaamkii Adeerkiisa Siyaad Barre ee kaligii-taliska ahaa.